WordPress: MySQL ရှာဖွေခြင်းနှင့် PHPMyAdmin ကို အသုံးပြု၍ အစားထိုးပါ Martech Zone
WordPress: MySQL ရှာဖွေခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်း PHPMyAdmin ကိုအသုံးပြုပါ
တနင်္လာနေ့, မေလ 14, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာ layout ကိုအနည်းငယ်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ ငါဖတ်ပြီးပြီ John Chow's blog နှင့်ပေါ် Problogger ၏ဘလော့ဂ် သင်၏ကြော်ငြာကိုနေရာတစ်ခုအတွင်း၌နေရာချခြင်းသည်ဝင်ငွေသိသိသာသာတိုးလာနိုင်သည်။ ဒင်းအဖြစ်ကောင်းစွာသည်သူ၏အပေါ်အလုပ်လုပ်သည်။
Darren ၏ site တွင်သူသည်စာဖတ်သူများမျက်စိလှုပ်ရှားမှုကိစ္စသာဖြစ်သည်ဟုသူရေးသားခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ၏ထိပ်ဆုံးတွင်နဖူးစည်းစာတန်းရောက်သောအခါစာဖတ်သူကအာရုံမစိုက်ဘဲကျော်သွားလိမ့်မည်။ ကြော်ငြာသည်အကြောင်းအရာ၏ညာဘက်သို့ရောက်သောအခါစာဖတ်သူသည်၎င်းကိုကျော်ဖြတ်သွားလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏ပင်မစာမျက်နှာကိုသန့်ရှင်းစွာထားရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ အဲဒါကိုပြောင်းလဲပြီးပိုမိုကျူးကျော်လာအောင်လုပ်ခြင်းကကျွန်တော့်ကိုဝင်ငွေပိုရစေနိုင်တယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအမြဲတမ်းတိုက်လှန်ခဲ့ရတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတကယ်ဂရုပြုတဲ့စာဖတ်သူတွေကိုတကယ်အကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်အတွက် - ငါ့အိမ်စာမျက်နှာကိုနေ့စဉ်လည်ပတ်တဲ့သူတွေ။
ဒီကြော်ငြာကိုအပေါ်ညာဘက်ထောင့်မှာထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြနာတစ်ခုမှာဤသည်သည်ကျွန်ုပ်သည်ပုံပန်းသဏ္purposesာန်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပုံဆွဲရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အစာကျွေးရန်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။ အခြားအ feeds တွေကိုကနေခွဲခြား။ ငါများသောအားဖြင့်ပို့စ်တွင်ကလစ်ပါသည့်လက်ဝဲဘက်သို့မဟုတ်ကလစ်ပါတ်ပါတ်တစ်ခုကိုအပိုင်းအစတစ်ခုဖြင့်အစားထိုးသည်။
မွတ္စု: အချို့သောသူများသည်ဤအတွက်စတိုင်များကိုအသုံးပြုလိုကြသော်လည်း၊ ချိန်ညှိမှုသည်သင်၏အစာကျွေးမှုအသုံးချမှုတွင်အလုပ်မလုပ်ပါ CSS ကို.
MySQL အတွက် PHPMyAdmin ရှိ Update query ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအားလုံးမှန်ကန်ကြောင်းကိုသေချာစေရန်ပို့စ်တိုင်းတွင်တစ်ခုတည်းသောရုပ်ပုံများကိုအလွယ်တကူပြုပြင်နိုင်သည်။
table_name set ကို table_field = အစားထိုး (table_field, 'replace_that', 'with_this') ကို update;
WordPress အတွက်အထူး -
update ကို `wp_posts` set` post_content` = replace (`post_content`, 'replace_that', 'with_this') ကိုအစားထိုးပါ။
ကျွန်ုပ်၏ပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်“ image = 'right'” ကို“ image = 'left” နေရာတွင်အစားထိုးရန်ကျွန်ုပ်မေးမြန်းချက်ကိုရေးခဲ့သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီမွမ်းမံခြင်းမပြုမီသင်၏ဒေတာများကိုအရန်ကူးထားရန်လုံးဝသေချာပါစေ။
Tags: mysqlmysql အစားထိုးmysql ရှာရန်အစားထိုးဖို့Search ကိုစျေးကွက်wp_posts
Sys-Con - စိတ်အနှောင့်အယှက်အရှိဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်၊
Hit ဆိုတာဘာလဲ? နှင့်အခြား Analytics မှ Jargon
မေလ 14, 2007 မှာ 8: 46 AM
Doug ကောင်းတယ် သင်၏ဝင်ရောက်မှုစီးဆင်းမှုကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်
မေလ 14, 2007 မှာ 6: 58 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Slaptijack! ငါဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ငယ်အရွယ်အစားကိုပြုပြင်ပြီး CSS မှာအကွာအဝေးအချို့ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ Tweakin, tweakin, tweakin!
မေလ 14, 2007 မှာ 11: 50 AM
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခြား ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များမှာဘယ် (သို့) ညာဘက်ကကြော်ငြာတွေကိုအရင်ကမြင်ဖူးလဲဒါကြောင့်လူကြိုက်များတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပုံရတယ်။ သင်၏ကြော်ငြာသည်ပို့စ်၏ညာဘက်တွင်ကောင်းမွန်စွာစီးဆင်းသည်။
ငါမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာလည်းငါ၏အကြော်ငြာတွေကိုမှန်ကန်ကြောင်းတရားမျှတမှုမှပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်နောက်ထပ် ၀ င်ငွေရရှိခြင်းရှိ၊ မရှိကိုစစ်ဆေးရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။
မေလ 14, 2007 မှာ 6: 34 pm တွင်
ငါသူတို့ကိုကျိန်းသေခြေရာခံသွားတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထင်မြင်ချက်များသည်ယခုအချိန်တွင်အနည်းငယ်ကျဆင်းလာသဖြင့်ဝင်ငွေသည်လည်းနောက်ကျကျန်နေခဲ့သည်။ ငါကြည့်ဖို့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပေးမယ်! ငါကအကြောင်းအစီရင်ခံရန်သေချာပါလိမ့်မယ်
မေလ 14, 2007 မှာ 2: 51 pm တွင်
မင်းရဲ့ index page မှာပါတဲ့နဖူးစည်းစာပေကြော်ငြာတွေနဲ့တစ်ခုခုရလား။ သူတို့ကိုငါကောင်းကောင်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။
ယေဘုယျအားဖြင့် In-post ကြော်ငြာများ (အကျယ် ၁၈၀ နှင့် ၂၅၀) နှင့် post ပြီးနောက်ကြော်ငြာများ (အကျယ် ၃၃၆) သည်အများဆုံးအာရုံစိုက်မှုကိုရရှိသည်။
မေလ 14, 2007 မှာ 6: 56 pm တွင်
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Rick ။ ငါတကယ်တက် messed ခဲ့ကြပြီမဟုတ် စာမျက်နှာအားဖြင့်ကြော်ငြာများကိုခြေရာခံ တစ်ပါတ်အကြာအထိသည်အထိ။ ယခုအချိန်အထိပင်မညွှန်းကိန်းစာမျက်နှာတွင်နှိပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဒါကကျွန်မမျက်စိကိုဆက်ကြည့်နေတဲ့အရာပါ။
မေလ 15, 2007 မှာ 2: 16 pm တွင်
မေလ 15, 2007 မှာ 8: 58 pm တွင်
ငါပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ ငါရှိသည် ပို့စ်ပို့စ် ငါရေးသားခဲ့သည် plugin ကို ... ဒါပေမယ့်သူကငါတကယ်လိုအပ်သောအရာကိုမလုပ်ပေးဘူး။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဖြန့်ချိသို့မဟုတ်နှစ်ခု?
28:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 35
mydsql တွင်“ right” နှင့်ပါ ၀ င်သော secondds ကို update လုပ်ရန်ပြaနာရှိသည်
UPDATE ivr_data RET SET (TIME, 2) = '00' RIGHT ဘယ်မှာလဲ (TIME, 2)! = '00';
သြဂုတ် 7, 2007 မှာ 8: 35 AM
ဟေ့ Doug ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုကျွန်ုပ်၏ WP DB တွင်အသစ်ပြောင်းရန်သင်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျက်သရေနဲ့တူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
BTW သည်ဤစာမူကိုဂူဂဲလ်၌တွေ့ပြီး“ mysql search အစား query query” ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ 3rd တက်လာ၏။
သြဂုတ် 7, 2007 မှာ 10: 25 AM
Woohoo! တတိယကကောင်းတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ site သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Search Engines တွင်နေရာကောင်းတစ်ခုရရှိခဲ့ပုံရသည်။ ဖြစ်ချင်တော့၊ ငါဟာ Search Engine Blogs တွေအများကြီးပါ။ 🙂
9:2008 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 5, 05 တွင်
ဒါကငါ့ mysql အတွက်ပိုကောင်းတဲ့ပုံပဲ .. ..
UPDATE wp_posts SET post_content = replace (post_content၊ 'ဒီအစားထိုး'၊ 'ထို' နှင့် ');
5:2009 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 55
UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE (post_content၊ 'www.alznews.net', 'www.alzdigest.com');
ဖြစ်နိုင်သည်ကို 'အစားထိုး' စာလုံးခံရဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်
ငါ၏အ X ကိုမှတ်ချက်
7:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 47
4:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 28
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သတ္တုတွင်းသည်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ "not" ကို အသုံးပြု၍ စာသားကိုအစားထိုးရန်အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့အခြားတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းရန်၎င်းကိုအသုံးပြုနေသည်။ ၎င်းသည်အလုပ်များစွာကိုကယ်တင်ခဲ့သည်။
1:2011 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 1, 37 တွင်
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်ပျံသန်းသော MySQL အတွင်းရှိ string တစ်ခုကိုအစားထိုးချင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုနေရာတွင်အချက် ၂ ခုပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဒါနဲ့ REPLACE () ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်။
ဤသည်မှာငါ boolean တန်ဖိုးကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုသော syntax ဖြစ်သည်။
အစားထိုးပါ (အစားထိုးပါ (နေရာ၊ ၁၊ ဟုတ်ကဲ့)၊ ၀၊ ၀၊